Iipaprography - Ukususela kwiMida kwiClay ukuya kwiMephu yeComputer
Iiprographic ichazwa njengenzululwazi kunye nobugcisa bokwenza imephu okanye iimpawu ezibonakalisa imifanekiso / imifanekiso ebonisa imiqondo yendawo kwindawo ezahlukeneyo. Iimephu zibonisa ulwazi lweendawo malunga neendawo kwaye zinokuba luncedo ekuqondeni iimodi, imozulu kunye nenkcubeko kuxhomekeke kuhlobo lwemephu.
Iifom zokuqala zeemifanekiso zenziwe ngeetyebhethi zobumba kunye namadonga endonga. Njengoko iteknoloji kunye neemephu zandiswe ngokucatshulwa kwiphepha kwaye zibonise imimandla abaqhubi abaye bahamba ngayo.
Namhlanje imephu ingabonisa i-plethora yolwazi kunye nokufika kwethekhnoloji njenge-Geographic Information Systems (GIS) ivumela ukuba imephu ithathwe kalula ngama-computer.
Eli nqaku linikezela isishwankathelo sembali yebalaphu kunye nokwenza imephu. Ukubhekisela kwiinkalo zezifundo ezizimeleyo ekuphuhliseni imidwebo yemifanekiso kufakwe ekupheleni.
Iimephu zokuqala kunye neKartography
Ezinye zeemephu zokuqala ezaziwayo zibuyele kwi-16 500 BCE kwaye zibonisa isibhakabhaka ebusuku kunomhlaba. Ukongeza imifanekiso yamatye yamandulo kunye nemifanekiso eqingqiweyo yamatye ibonisa indawo efana neenduli kunye neentaba kunye nabavubukuli bakholelwa ukuba le mizobo yayisetyenziselwa ukuhamba kwiindawo ababonise ngayo kwaye zibonakalise indawo abaye bayityelela ngayo.
Iimephu nazo zadalwa kwiBhabhiloni yaseBhabhiloni (ikakhulu kwiiphilisi zedongwe) kwaye kukholelwa ukuba zithathwa ngeendlela zokuhlola ezichanileyo. La mapuphu abonisa iimpawu zezobugcisa ezifana neenduli kunye neendlambo kodwa nazo zibhalwe iimpawu.
Imephu yehlabathi yeBabiloni ithathwa njengemephu yokuqala yehlabathi kodwa iyingqayizivele kuba ibonisa ukubonakaliswa komhlaba. Liye labuyela ngo-600 BCE
Iimephu zokuqala zephepha ezifunyenwe ngabadwebi beemifanekiso njengoko iimephu ezisetyenziselwa ukuhamba kunye nokubonisa indawo ezithile zeMhlaba zadalwa ngamaGrike akuqala.
U-Anaximander wayengowokuqala wamaGrike amandulo ukudweba imephu yehlabathi eliyaziwayo kwaye ngoko unyanzeliswa ukuba ungomnye wabalingisi bokuqala beemifanekiso. Hecataeus, uHerodotus, uEratosthenes kunye noPtolemy babengamanye amaqonga aseGrike aziwayo. Iimephu ezazithabathayo zivela kubaqaphelisisi kunye nokubala kwemathematika.
Iimephu zeGrike zibalulekile kwimifanekiso yokubhalwa kwemifanekiso kuba babedla ngokuba iGrisi njengendawo ephakathi kwehlabathi kwaye bajikelezwe ulwandle. Ezinye iimephu zeGrike zakuqala zibonisa ihlabathi lihlulwe libe ngamazwekazi ase-Asia kunye neYurophu. Ezi ngcamango zazivela kwimisebenzi kaHomer kunye nezinye iincwadi zesiGrike zokuqala.
Abaninzi befilosofi baseGrike babecinga ukuba iMhlaba ibe yindidi kwaye oku kwaye kwathonya i-cartography yabo. U-Ptolemy umzekelo wenza iimephu ngokusebenzisa inkqubo yoqhagamshelwano kunye nokulinganisa ububanzi kunye neemeridi zokubala ukubonisa ngokuchanekileyo indawo zeMhlaba njengoko wayazi. Oku kwaba sisiseko seemephu zamanqaku kwaye i-atlas yakhe iGeographia ngumzekelo wokuqala we-cartography yamanje.
Ukongeza kwiimephu zeGrike zamandulo, imizekelo yokuqala yeempapasho zeempapasho zivela eChina. Le mibala yonyaka ukuya kwi-4 leminyaka yeXesha le-BCE kwaye yafakwa kwiibhloko zokhuni. Ezinye iimephu zaseTshayina zakudala zaveliswa ngesilika.
Iimephu zakudala zesiTshayina ezivela kwi- Qin State zibonisa imimandla eyahlukeneyo eneempawu ezifana ne-Jialing River kunye neendlela kwaye zibhekwa njengenye yeemephu zehlabathi ezona zidala kakhulu (i-Wikipedia.org).
I-cartography iqhubekile ekuphuhliseni eChina kuzo zonke iindidi zayo ezahlukahlukeneyo kunye ne-605 kwimephu yangaphambili isebenzisa inkqubo yegridi yenziwe nguPei Ju we-Sui Dynasty. Ngo-801 i- Hai Nei Hua Yi Tu (Imephu yeziBini zaseTshayina kunye noBharbri ngaphakathi (ezine) iiLwandle) zadalwa nguTang Dynasty ukubonisa iChina kunye neenkcubeko zaseCentral Asia. Imephu yayingama-30 emitha (9.1 m m) ngama-33 inyawo (10 m m) kwaye isetyenziswe inkqubo yegrid enezinga elichanekileyo.
Ngomnyaka we-1579 i-atlas Yutu i-atlas yaveliswa kwaye iqulethwe kwiimephu ezingaphezu kwe-40 ezazisetyenziselwa inkqubo yegridi kwaye yabonisa iimpawu ezinkulu njengeendlela kunye neentaba kunye nemida yezopolitiko ezahlukeneyo.
Iminyaka ye- 16 kunye neye-17 yeengingqi zaseTshayina zaqhubeka nokuphuhlisa ukubonisa ngokucacileyo imimandla ekuhlolisweni. Ngomnyaka we-20 wenkulungwane yeChina yakha i-Institute of Geography eyayinoxanduva lokubhala imifanekiso esemthethweni. Yagxininisa umsebenzi wenkalo ekuveliseni imephu ejoliswe kwi-geographie ngokomzimba nakwezoqoqosho.
NjengesiGrisi kunye neChina (kunye nezinye iindawo kulo lonke ihlabathi) ukuphuculwa kwebalazwe kwakubaluleke kakhulu eYurophu. Iimaphu zamandulo zangaphambili zazifanekisela ezo zivela eGrisi. Ukususela ngekhulu le-13 leminyaka i-Majorcan Cartographic School yaphuhliswa kwaye yayinokusebenzisana kwamaYuda ngabadwebi beemifanekiso, i-cosmographers kunye nabahamba ngeendlela zokuhamba. ISikolweni seMarcancan Cartographic sakha iCharmal Portolan Chart - isatidi ye-nautical mile esetyenziswe imigca yekhampasi ehamba phambili.
Iiprotography zaqhutyelwa phambili eYurophu ngexesha lokuPhonononga njengabadwebi beemifanekiso, abahwebi nabahloli-zincwadi bavelisa imephu ebonisa indawo ezintsha zehlabathi ezazityelela kuzo. Baye bahlakulela iinkcukacha zeempawu zamanzi kunye neemephu ezazisetyenziselwa ukuhamba. Ngekhulu le-15 leminyaka uNicholas Germanus wasungula ukucaciswa kwemephu yaseDonis ngokufana nokulingana kunye ne-meridians eyadibana nezibonda.
Ekuqaleni kwee-1500 iiimephu zokuqala zamaMelika zaveliswa ngumdwebi we-cartographer kunye nomhloli wamazulu, uJuan de la Cosa, owahamba noChristopher Columbus . Ukongeza kwiimephu zeMerika wazidala ezinye zeemephu zokuqala ezibonisa iMelika kunye ne-Afrika ne-Eurasia.
Ngomhla we-1527 uDiogo Ribeiro, umdwebi wePotokezi we-cartographer, wakha imephu yokuqala yehlabathi yesayensi ebizwa ngokuba yiPadron Real. Le mephu ibalulekile kuba ibonisa ngokuthe ngqo imida yeCentral neSouth America kwaye yabonisa ubukhulu be-Ocean Ocean.
Phakathi kwe-1500 uGerardus Mercator, umdwebi webalazwe waseFlemish, waqulunqa imephu ye- Mercator. Olu qwa lasele lusekelwe kwimathematika kwaye lwalunye lwezona zichanekileyo kwiindawo zokuhamba emhlabeni jikelele ezazifumaneka ngexesha. Ukuqulunqwa kweMercator ekugqibeleni yaba yindlela ecacileyo kakhulu yokusetyenziswa kwemephu kwaye yayiyimigangatho efundiswa kwimifanekiso.
Kuwo wonke ama-1500s ukuya kuma-1600 kunye no-1700 ukuqhutyelwa phambili kwe-Yurophu kwaphumela ekudalweni kweemephu ezibonisa indawo ezahlukahlukeneyo zehlabathi ezingazange zipakwe kwimephu. Ukongezwa kwimiba yamaphupha aqhubeka nokukhula ngokuchaneka kwabo.
Imifanekiso yamanje yenziwa njengokuba uphuhliso oluthile lobuchwepheshe. Ukuveliswa kwezixhobo ezifana nekhampasi, i-telescope, i-sextant, i-quadrant kunye nomshicileli wokushicilela konke kuvunyelwe ukuba imephu iyenziwe ngokulula nangokuchanekileyo. Ubuchwephesha obutsha bukhokelela ekuphuhlisweni kweemephu ezihlukeneyo zemephu ezibonisa ngokucacileyo ihlabathi. Ngokomzekelo, ngo-1772 i-conical conic conic yenziwa kwaye ngo-1805 i-Albers yecandelo elilinganayo le-conic projection laphuhliswa. Kwiminyaka ye-17 neye-18 i-United States Geological Survey kunye ne-National Geodetic uphando basebenzisa izixhobo ezintsha zokubeka imephu kwimizila kunye novavanyo lwamazwe karhulumente.
Ngenkulungwane ye-20 ukusetyenziswa kweenqwelo zokuthatha iifoto zendalo zatshintshile iintlobo zedata ezingasetyenziselwa ukudala imephu. I-Satellite yesithombe sele idibene kwiluhlu lweedatha kwaye inokunceda ekuboniseni iinkalo ezinkulu ngeenkcukacha ezininzi. Ekugqibeleni, iiNkqubo zoLwazi lweGeographic okanye i-GIS, iteknoloji entsha ngokutshintsha imifanekiso yamaphepha namhlanje kuba ivumela iindidi ezininzi zeemephu zisebenzisa iindidi ezahlukeneyo zedatha ukuba zenziwe kalula kwaye ziqhutywe ngeekhomputha.
Ukufunda okungakumbi malunga nembali yebalazwe kwiSebe leJografi kwiYunivesithi yaseWisconsin "Iprojekthi yeProtography Project" kunye neYunivesithi yaseChicago ethi "Imbali yeCartography".
Yintoni uMnyama Omnyama?
Indlela yokudibanisa isenzi elithi "Sapere" ngesiTaliyane
Ouch! I-19 ye-Sunburns kakhulu kunye ne-Tan Lines EVER
I-Herrerasaurus Yayinye yezoDinosaurs zokuQala zokuHamba emhlabeni